ကိုအောင်မှိုင်း – ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိ | MoeMaKa Burmese News & Media
Tags: ရခိုင်, ပြည်တွင်းစစ်
မိုက်ခဲစိန် ● ငါက ရိုဟင်ဂျာ၊ နင်က ဒါကို မမြင် … တဲ့လား (1)
Interview with Aung Din, Burmese Hluttaw Inside Out … Perspectives (0)
5 Responses to ကိုအောင်မှိုင်း – ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိ
kill_the_devils on March 21, 2016 at 11:57 am
 Nargis Constitution for THUGS,THIEVES & CROOKS
THUGS ,THIEVES & CROOKS from USDP
 USDP’ Private army (so called Tatmadaw) and
Thug,Thief & Crook VP
This is justavery obvious organized crime.
THUGS,THIEVES & CROOKS never come with clean hands.
chom on March 21, 2016 at 8:16 pm
သိပ်မှန်တယ်။ ညံ့ကြလို. သမိုင်းတလျှောက်လုံးလူညံ့ လူဖား ငတုံးတွေချည်း (စစ် သားတွေက အတုံးဆုံး အနဆုံးဘဲ) ဆုတော့ ကုလကောင်းမှုနဲ့ တုင်းပြည်ဖြစ်ကျန်နေတာ ရှိတာဘဲ နို.မို. ကုလားက တက်သိမ်းလိုက်တာကြာပြီ။နေဝင်းသန်းကြိုင်ဆိုတာ တော်တော် ကု နတာ၊ဘေးနားလူတွေဝိုင်းလိမ်နေတာလောက်အဟုတ်မှတ်နားထောင်တဲ့ကောင်တွေ။
Star Wraith on March 22, 2016 at 1:43 am
ထိုင်း၁ယောက်ရဲ့မွေးစားသားအဖြစ်ခံယူထားပြီး ဒါမျိုးပြောရဲတာတော့ မကောင်းဘူး။
win tun on March 22, 2016 at 6:10 pm
အစကတည်းက ဒီလိုပုံဖြစ်အောင် နည်းထွင်ထားတာပဲလေ … မထူးဆန်းတော့ဘူး … ထူးတာက နံရုံကို ပုတ်ပြပြီး ဖြိုခွင်းပါတယ် လုပ်လို့ နောက် ၅ တင်မက နှစ် ၅၀ လဲ ဂလိုပဲနေမယ် … ကျလာတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေရှင်း အကိုင်းတွေ တက်ချိုင်ယုံနဲ့ အဲဒီအပင်ဆိုး မျိုးမပြုတ် …. အမြစ်ပါမလှန်သမျှ ဇာတ်လမ်းရှည်မည်ပါ့
Oakkar on March 23, 2016 at 6:27 am
မိန့်ခွန်းတွေ ဘယ်နှစ်ခုများ နားထောင်ဘူးလို့ ဒီလိုပြောရဲတာပါလိမ့်။ ဘယ်သူ့ကို သစ္စာစောင့်ရမလဲ မေးကတည်းက အသိဉာဏ်နည်းပြီး စာရေးမှန်း သိသာပါ့ကွာ